यस्ता खाना र काम जसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ । जानकारिका लागी शेयर गरौ – Sandesh Munch
यस्ता खाना र काम जसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ । जानकारिका लागी शेयर गरौ
May 29, 2020 350
यस्ता खाना र काम जसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ । इम्युनिटी सिस्टम एवं रोग प्रतिरोधात्मक तन्त्रले हाम्रो शरीरमा सम्भावित रोगको संक्रमणबाट रक्षा गर्छ। हरेक जीवित मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक तन्त्र नामको यस्तो संयन्त्र हुन्छ, जसले ब्याक्टेरिया, भाइरस आदिबाट शरीरलाई टाढा राख्छ। अतः रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि खानपान र दिनचर्या निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो त हाम्रो भान्सामा यस्ता खानेकुरा उपलब्ध हुन्छन्, जसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ।
लसुन : लसुनले हाम्रो शरीरमा ब्लड प्रेसर कम गर्छ । यसमा हुने एन्टिक्यान्सर र एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरको विषाक्त तत्व बाहिर निकाल्छ । नियमित रुपमा हरेक बिहान उठ्नासाथ खाली पेटमा लसुन सेवन गर्नुपर्छ । यसले श्वास नलीको समेत सफाइ गर्छ ।
प्याज : प्याजमा फ्लेवेनाइड्स नामको तत्व सामेल हुन्छ, जसले हाम्रो शरीरको धमनीमा विशाक्त तत्व जम्मा हुन दिँदैन । यसले सुन्निने समस्या आउन दिँदैन । त्यसैले प्याजको सेवन शरीरको लागि लाभदायक हुन्छ । यसलाई तरकारीमा मिसाएर वा सलादको रुपमा काँचो खान सकिन्छ ।
कागती : कागतीले एक डिटाक्सीफायरको रुपमा काम गर्छ । नियमितरुपमा हरेक बिहान कागती पानी सेवन गर्नुपर्छ। जसले शरीरमा रहेको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्छ ।
अलसी : अलसीमा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड हुन्छ, जसले हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । साथै, पेटलाई पनि सफा राख्छ । हरेक बिहान आधा चम्चा अलसीको बिउ सेवन गर्दा कब्जियतको समस्या रहँदैन ।
बन्दा : सब्जी वा सलादको रुपमा बन्दाको सेवन गर्न सकिन्छ । यो स्वादिलो त हुन्छ नै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक पनि हुन्छ। बन्दाले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । यसले पाचन नलीलाई पनि सफा बनाउँछ ।
बेसार : बेसार एन्टिअक्सिडेन्टको राम्रो श्रोत हो । यसले रगत शुद्ध बनाउने काम गर्छ । साथै, शरीरको रुप र रंगमा सुधार ल्याउन पनि बेसार उपयोगी हुन्छ । यसले क्यान्सरदेखि अल्जाइमरसम्मका रोगबाट मुक्त गराउने क्षमता राख्छ । बेसारमा रहेको करक्युमिन नामक तत्वले रगतमा सुगरको स्तर नियन्त्रण गर्छ।
च्याउ : च्याउमा एन्टिअक्सिडेन्ट भरपुर मात्रामा हुन्छ । यसले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । च्याउमा भिटामिन डि, बि–१, बि–३, बि–५, बि–६ आदि पाइन्छ । यसले हड्डीलाई पनि बलियो बनाउँछ । तौल घटाउन र सुगर लेबल सही राख्नका लागि च्याउ उपयोगी हुन्छ।
सरसफाइ : रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि वातावरण स्वच्छ हुन आवश्यक छ । किनभने फोहोर मैलाबाट रोगको संक्रमण फैलने भय रहन्छ । त्यसो त वातावरण मात्र होइन आफ्नो लता कपडा, भाँडाकुँडा, ओड्ने ओछ्याउने, पहिरन सबै कुरा सफा हुनुपर्छ ।
निद्रा : पर्याप्त निद्रा लिनुपर्छ । यदि राम्ररी निन्द्रा पुगेन भने पनि शरीरको रोग सँग लड्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । शरीर र मस्तिष्कले सहि ढंगले काम गर्नका लागि ६ देखि ८ घण्टाको निद्रा आवश्यक छ ।
व्यायाम र स्वस्थ्य दिनचर्या : सन्तुलित खानपानसँगै नियमित व्यायाम, स्वस्थ्य दिनचर्या पनि आवश्यक हुन्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्नका लागि ।
पानी : पर्याप्त मात्रामा पानीको सेवन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा मृगौलाको कार्य प्रणाली चुस्त दुरुस्त रहन्छ । शरीरको विषाक्त पदार्थ बाहिर जान्छ । यसले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ ।
पढिसकेपछी जानकारिका लागी शेयर गरौ
Prevबर्खरै प्राप्त समाचार ! एकदिनमा थपिए १७० संक्रमित
Nextविदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय
उपत्यकामा १८२ सहित थप ८३८ जनामा को’रोना पुष्टि, ११ जनाको मृ’त्यु
पाकिस्तानले जारी गर्यो नयाँ नक्सा, भारतको सातो गयो
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83675)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27406)
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13250)
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12472)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12175)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11412)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10178)
कपाल झर्न रोक्ने उपाय,७ दिनमै कपाल झर्न रोक्नुहोस
१ महिनामा ११ केजी मोटोपन घटाउने घरेलु उपाय
अनुहार चम्किलो र गोरो बनाउने ६ घरेलु उपाय
यस्तो श्रीमानलाई आजै छोडदिनुस तपाइको भबिश्य छैन